Amava kwigumbi laseTibetan elahlukileyo - I-Airbnb
Amava kwigumbi laseTibetan elahlukileyo
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguThupten
I-wifi ekhawulezayo ye-57 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwigumbi lokulala.
Uya kuziva usekhaya kweli gumbi linelanga liqaqambile, lisanda kulungiswa, umoya opholileyo, upholile, ukhululekile, igumbi elithe cwaka. Eli gumbi lineefestile ezikhazimlisiweyo kabini, i-Queen bed enomandlalo we-spring otyebileyo, ilinen ekumgangatho ophezulu, igumbi lokuhlambela labucala elineshawari eshushu kakhulu, kunye nebalcony. I-intanethi ekhawulezayo. Umbono omangalisayo we-Himalayas kunye nemibono eyingqongileyo. Yiba namava obubele baseTibet. Ndinelinye igumbi "Experience Authentic room". Ndikwaqhuba ukhenketho losuku lwenkcubeko yaseTibet ePokhara.
Indawo yam iseLakeside. Azikho ezinye izakhiwo ezincanyathiselwe kwindawo yethu yokuhlala. Ngoko ke, amagumbi aqaqambile kwaye umoya omtsha ufumaneka ngaphandle. Ikwabekwe kwindawo ezolileyo. Umatrasi uthambe kakhulu kwaye ungqindilili (9 i-intshi ubukhulu) kunye nentwasahlobo. Igumbi lokuhlambela eline-en suite elineshawa eshushu. iiyure ezingama-24. gcina umbane nge-intanethi ye-fiber enesantya esiphezulu kakhulu kunye ne-Wi-Fi. Eli gumbi lifudumele ngokwaneleyo nangexesha elibandayo lasebusika kuba ukukhanya kwelanga kuza ngqo kweli gumbi. Ungasebenzisa ikhitshi kwaye ndinezixhobo zokupheka ezaneleyo. Ikhitshi inkulu ngokwaneleyo abantu aba-4. Kukho isihluzo se-Euro sokucoca amanzi ekhitshini ukugcina ukusela nokupheka ngokunjalo. Kubathandi bekofu, ndinomenzi wekofu omncinci ngokunjalo. Kuthatha kuphela i-10 ukuya kwi-15 imizuzu ukuhamba ukuya kwindlela enkulu yaseLakeside, i-Fewa Lake, iindawo zokutyela kunye neendawo zokuthenga.
Kutshanje, ndithenge umatshini omtsha wokuvasa we-LG wamva nje. Kodwa ndibiza imali encinci ngokuhlamba iimpahla. Ndigcina imithwalo yendwendwe yam kunye nezinto zayo xa zithatha uhambo simahla.
Abamelwane bam bakude kakhulu kwigumbi lam. Azikho ezinye izakhiwo ezincanyathiselwe kwindawo yethu yokuhlala. Ngoko ke amagumbi aqaqambe kakhulu kwaye kukho umoya omtsha emagumbini. Umntu unokubona umbono weFishtail, iintaba zeAnnapurna, kunye neenduli ezijikelezileyo ukusuka eluphahleni lwethu. Kukho amabala ajikeleze indlu yethu.
Umbuki zindwendwe ngu- Thupten
Ndiyakuthanda ukudibana nabantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi kwaye ndiyathanda ukwabelana ngamava ethu omnye nomnye. Ndihlala ndonwabile ukunceda kwaye ndibonelele ngolwazi oluyimfuneko malunga nesixeko endihlala kuso kwaye ndibakhokele ngeenxa zonke. Ndikwathanda ukwazisa inkcubeko yethu yasekhaya yaseNepali kunye neTibet kunye nendlela yabo yokuphila.
Ndiqhuba ukhenketho losuku lwenkcubeko yaseTibet kwilali yaseTibet yasePokhara. Igama lenkampani yam yi "The Tibetan Encounter Day Tour". Inkampani yam icetyiswa kakhulu kwincwadi yeplanethi ye-Lonely yaseNepal. Ukuba unomdla wamkelekile ukuba ujoyine enye yokhenketho lwethu losuku lwenkcubeko yaseTibet. Ndikwacwangcisa uhambo olwahlukileyo olujikeleze ummandla wase-Annapurna.
Ndiyakuthanda ukudibana nabantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi kwaye ndiyathanda ukwabelana ngamava ethu omnye nomnye. Ndihlala ndonwabile ukunceda kwaye ndibonelele ngo…